Displaying 121 - 130 of 68565
EU News 179/2020
Read more about The European Union commits € 32 million (304 Crore Taka) responding to the needs of Bangladeshi Host Communities and Rohingyas in Cox’s Bazar
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က Aceh မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတွင် သောင်တင်နေသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များ အများစုပါဝင်သော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၁၀၀ နီးပါးကို ဘေးကင်းစွာ ကမ်းတက်ခွင့်ပေးရန် နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့နှင့် အကာအကွယ်များ ပေးအပ်ရန် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥရောပသမဂ္ဂမှ လှိုက်လှဲစွာကြို
၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ထိခိုက်စေမှုကို စီမံကုစားရာတွင် ထောက်ကူပေးရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သော ဩစတြိယနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ နှင့် ပိုလန်နိုင်ငံတို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပေးချေရမည့် ဝတ္တရားရှိသော ပမာဏအားဖြင့် ကန်ဒေါ်လာ ၉၈ မီလီယံ [ကျပ်ငွေ ၁၃၄.၅ ဘီလီယံ] ရှိသည့် ကြွေးမြီဝန်ဆောင်မှုပေးချေခြင်းများကို ဆိုင်းငံ့ထားပေးသည်။
European Union member states Austria, Finland, France, Germany, the Netherlands and Poland are suspending Myanmar’s debt service payments for the May to December 2020 period - amounting to USD 98 million [134.5 billion MMK] - to help the country manage the severe impact of the COVID-19 pandemic.
Read more about Mongolia: Coronavirus update as of2July 2020
Dans le nord de la Guinée, Fatoumata ouvre la voie à plus de tolérance au sein de sa communauté.
Read more about “Même si nos opinions diffèrent, cela ne nous empêche pas de vivre harmonie.”